Suuqgeynta Instagram: Sida Loogu Dhiiri Galiyo Shabakadaha Bulshada ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Suuqgeynta Instagram: sida aad naftaada ugu kobcin karto shabakadaha bulshada
December 19, 2018 0 comments 1343
Sida loo baadho barta Instagram sida madal suuq geynta warbaahinta bulshada ah.
Si kor loogu qaado suuqgeyntaada Instagram, marka ugu horeysa, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso kuwa raacsan si joogto ah oo joogto ah. Markii ay dadku sii ogaadaan astaantaada, ayey badineysaa fursadahaaga aad ku gaarsiin karto bartilmaameedkaaga. Aynu dib u eegno talooyinka iyo xeeladaha ku saabsan sida loo baadho Instagram sida madal suuq-geynta warbaahinta bulshada si sumcaddaada looga dhigo mid caan ah. Laakiin runtii mid ka mid xeeladaha ugu dhaqsaha badan ayaa ah ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram.
1 Adeegso hashtag gaar ah, cusub oo soojiidasho leh.
Hashtags kaliya muhiim uma ahan Twitter; Waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan barta Instagram. Waa hab aad u wanaagsan sida ay adeegsadayaashu uga heli karaan raadinta Instagram-ka mobiladooda. Marka la barbar dhigo Twitter, halkan looma xadido tirada jilayaasha. Waxaad ku dari kartaa qaar ka mid ah calaamadaha boostadaada si aad uguxirdid. Markaad goaansaneysid hashtag ee astaanta, waxaa lagu talinayaa inaad abuurto hashaag gaar ah. Isku day inaad u dhigto mid kuu gaar ah oo cusub sidii ugu macquulsan. Isku day dhowr nooc oo hashayaal ah, sida hashaag gaar u ah, hashtags guud iyo hashtags isbeddello, si aad uga dhex muuqatid raadinta.
Tusaalooyinka xaraashka gaar-u-gaarka ah waa:
Xaaladda guud ee 'Hashtag' waa in loo diyaariyo laba kelmadood oo kelmad keliya u leh macno, tusaale ahaan. Halkii #QL, #AskQL waa hashtag ka wanaagsan.
Waxaan kuu sheegay oo dhan ku saabsan Instagram TV.
2 Si joogto ah ula falgal kuwa raacsan.
Mar alla markii aad hesho raaciyayaal, ha ahaato dabiici ahaan ama markaad soo iibsato taageerayaal Instagram, ha ka baqin inaad ku sii jirtid. Si joogto ah u dheji waxyaabaha naxdinta leh ee kuwa raacsan ay u arkaan inay khusayso danahaaga iyo ganacsiga. Iska ilaali inaad bilowdo qoraalo aan kala sooc lahayn, taas oo ah, usbuuciiba mar ama toban jeer, inta ugu macquulsan. Ugu yaraan laba jeer maalintii dhajinta ayaa shardi ah. Mar alla markii ay taageerayaashaadu bilaabaan inay koraan, waxaad bilaabi kartaa dhajinta saddex ama afar jeer maalintii. Iswaafaqsanaantu waa waxa ugu muhiimsan! Sida laga soo xigtay Anthony Carbone, "Haddii aad ku sii nagaato niche oo aad ku muujiso sax ahaansho iyo qiiro leh qoraaladaada, waxaad ka heli doontaa dad badan oo raacsan."
Markii dad badan oo aad si firfircoon uga qayb qaadan karto oo aad ka dhaadhicin karto inay ka faalloodaan waxa ku jira (sawirrada / fiidiyowyada), ayaa kuu sii fiicnaan doonta adiga. Tan iyo markaas, waxay kicin doontaa xiisaha kuwa kale ee doonaya inay wax ku biiriyaan ama faallo ka bixiyaan waxa ku jira sidoo kale.
3 Ha ku dhagaysan dhagaystayaashaaga xog-badan
Shaki la'aan, wada-noolaashaha waa lama huraan, laakiin haddii ay ka maqan tahay wada-noolaanshaha iyo ku habboonaanta waxa ku jira, spam ama macluumaad xad-dhaaf ah ayaa la soo saaray. Ka dhig inta jeer ee aad noqoneyso mid joogto ah oo isdaba joog ah. Halkii aad ka wacdiyi lahayd, u ballan qaad. Waxaa wanaagsan in mararka qaarkood la isweydiiyo, waa inay dareemaan in la qiimeeyo. Qod falkooda waxtarka leh. Adeegso Codsiyada sawirrada ee meheradaha yaryar.
4 Ka faa'iidayso aaladaha xorta ah.
Instagram sidoo kale waxay bixisaa aalad bilaash ah oo lagu falanqeeyo astaamaha ganacsiga; si xikmad leh, uga faa'iidayso ugudam iyaga si aad u suuq geyso alaabadaada iyo adeegyadaaga. Tusaale ahaan "Fahanka", a qalab falanqayn, wuxuu ku siinayaa helitaanka xogta ballanqaadka. Haddii koontadaada markii hore loo diiwaangeliyay sidii koonto shaqsi ah shirkaddaada, u beddelo a astaanta shirkadda. Waa tan sida aad uga faa'iideysan karto aaladaha bilaashka ah ee ganacsatadu u adeegsadaan inay ula socdaan qaabka astaamahaaga ee 'Instagram'. 'Aragtida' waxay kaa caawineysaa inaad fahamto dhagaystayaashaada, waxay ku siineysaa xog ku saabsan qoraallada leh dareenka ugu badan, kaqeybgalka, iyo ficillada. Ugu dambeyntii, waxaad soo gabagabeyn doontaa qoraallada wax ku oolka ah iyo kuwa aan si fiican ula shaqeynayn dhagaystayaashaada.
5 U adeegso waxyaabaha ku saabsan ilo kale oo la xiriira
Sida lagu sheegay cutubyadii hore, suuqgeyn wax ku ool ah oo guuleysta waxay u baahan tahay qoraallo joogto ah oo la xiriira badeecaddeeda iyo adeegyadeeda. Way iska cadahay in markasta oo hal abuur iyo soo jiidasho daabacan, aysan ahayn wax fudud sida ay umuuqdaan. Taasi waa meesha dib u adeegsiga maaddada ama bogsashada nuxurka ay u fidiso gacan qabasho. Adigoo bixinaya calaamad ama sheegashada boostada asalka ah, tani waa dhaqan gabi ahaanba dhaqan suuq geyn ah mana hoos imaanayso daruuraha madow ee khayaanada. Waa inaad hubisaa in farriimaha aad u weeciso ama bogsato ay ku habboon yihiin kuwa raacsan.
Suuqgeynta warbaahinta bulshada iyada oo loo marayo Instagram ayaa kuu fududayn karta inaad gaarato yoolalkaaga ganacsi ee gaarka ah. U adeegso Instagram si ballaadhan oo ku habboon, oo u koraan wax badan!
Waxaa jira talooyin iyo tabaha kale oo si wanaagsan loogu suuq geyn karo badeecadaada iyo adeegyadaaga barta Instagram, marka lagu daro kuwan '5' ee ugu waaweyn ee ay tahay inaad gacanta ku haysid.
1 Sida loo baadho barta Instagram sida madal suuq geynta warbaahinta bulshada ah.
1.1 1 Adeegso hashtag gaar ah, cusub oo soojiidasho leh.
1.2 2 Si joogto ah ula falgal kuwa raacsan.
1.3 3 Ha ku dhagaysan dhagaystayaashaaga xog-badan
1.4 4 Ka faa'iidayso aaladaha xorta ah.
1.5 5 U adeegso waxyaabaha ku saabsan ilo kale oo la xiriira
Sida loo soo dejiyo sawirrada Instagram
Soo gal barta Instagram adiga oo aan lahayn koonto